शनिबारको रात महिलाहरु बढी उत्तेजक
एजेन्सी । शनिबारको रात महिलाहरु यौन सम्पर्कका लागि बेकाबु हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतको हेल्थ र व्यूटी सम्बन्धि संस्था सुपरड्रगका अनुसार महिलाहरु हप्तामा एक पटक यौनका लागि
दशैंमा तौल बढ्यो ? सजिलै घटाउन अपनाउनुस् यी १० टिप्स
व्यायाम र डाइटिङका साथै यदि केही कुरा ध्यानमा राखे निकै सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ । फिटनेस विशेषज्ञ ओमारका अनुसार तौल घटाउन ३० प्रतिशत व्यायाम, ७० प्रतिशत डाइट र अन्य कुराको
बेला-बेला टाउको दुखिरहन्छ भने अपनाउनुहोस् समाधानका यी ८ उपाय
आधा टाउको दुख्ने, बेलाबेलामा बेस्सरी टाउको दुख्ने, कन्चट दुख्ने, चक्कर लाग्ने, वाक वाक लाग्ने, वान्ता हुने, घाम वा भीडभाडमा जाँदा टाउको दुख्ने, रिस उठ्ने जस्तो लक्षण माइग्रेनका हुन सक्छन् ।
यस्तो हुनुपर्छ मुटु रोगीको दशैंको खानपिन
बिनिता पन्त, डाइटिसियन मुटु रोगको समयमै निदान, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नियमित जाँचसँगै नियमित व्यायाम तथा सन्तुलित भोजनको आवश्यकता पर्छ । दशैँमा खाइने खानाका कारण ‘हर्ट अट्याक’ र ‘कोलेस्टेरोल’ बढ्ने
ग्यास्ट्रिकका रोगीले चाडबाडमा कस्तो जीवनशैली अपनाउने ?
डा रविन शर्मा नेपाली हिन्दूहरूका दुई ठूला पर्व दसैं र तिहार नजिकिँदैछन् । सबैभन्दा रमाइलो पक्ष यी चाड र खानपान सँगसँगै जोडिएर आउने गर्छन् । दसैंमा आ–आफ्नो क्षमताअनुसार सबैले घरमै विशेष
दैनिक ४ करोडको राँगाभैंसीको मासु बिक्रि
असोज ११, काठमाडौं- साहाकारी बन्ने र पशुवली र पशुजन्य काटमार रोक्ने अभियान तिब्र भैरहंदा मासु प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ । उपत्यकामा पछिल्लो समय राँगाभैंसीको मासु खपत बढेको खबर छ । काठमाडौं
असोज ११, काठमाडौं- चिकित्सकहरुले आन्दोलन सुरु गरेको ५ दिन भैसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै थालिएको यो आन्दोलनका कारण हजारौं बिरामी उपचारबाट बञ्चित भएका छन् । उपचारमा लापरवाही
क्यान्सर दीर्घ र नसर्ने रोग हो । यो रोगलाई निकै भयावह रोगको रूपमा लिइन्छ । क्यान्सर जुनसुकै उमेर समूह र लिङ्गका मानिसमा हुनसक्छ । विशेषतः महिलामा लाग्ने क्यान्सर मध्ये योनी
दसैंको मुखमा डा. केसीको १२औं अनशन, सफल होला त यसपाली ?
काठमाडौँ: प्रा डा गोविन्द केसीले पाँच सूत्रीय माग राखी पुनः सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलन गरी उनले आफ्नो १२ औँ अनशन सुरु गरेका हुन्। सरकारले सोमबार व्यवस्थापिका–संसदबाट बहुचर्चित राष्ट्रिय
पाल्पामा एलआइसीको ४३ औं शाखा
पाल्पा, ९ भदौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडले जिल्लाको तानसेनमा आफ्नो ४३ औं शाखा आइतबार उद्घाटन गरेको छ । एलआइसीका सहायक महाप्रबन्धक (डिजिएम) सुधीर सागरले विधिवत् पूजाआजा गरी रिबन काटेर उद्घाटन
सरकारी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी
चितवन, ९ असोज। पछिल्लो समय बढ्दो समस्याका रुपमा रहेको मिर्गौलाका बिरामीका लागि मिर्गौला प्रत्यारोपणको काम सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालले थाल्ने तयारी गरेको छ । कूल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशतमा कुनै
डा. केसीको चेतावनी :माफिया सांसदहरुको नाम सार्वजनिक गर्छु
असोज ८, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै एघारौँ पटक सम्म अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीले ‘माफिया’को हित संरक्षण गर्ने सांसदहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने अल्टिमेटम दिएका छन् । माथेमा